Culumada: Farmaajo ayaa masuul ka ah wixii dhacay | KEYDMEDIA ONLINE
Culumada: Farmaajo ayaa masuul ka ah wixii dhacay
Majmaca Culumada Soomaaliyeed, ayaa sheegay in Farmaajo uu qaadayo masuuliyadda dagaalladii xalay ka dhacay Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Abuukar Soomow, oo ah Afhayeenka hay’adda Culumada Soomaaliyeed, ayaa sheegay in Farmaajo uu masuul ka yahay dhibka dhacay iyo midka hadda taagan lagulana xisaab tami doono.
Sheekh Soomow, wuxuu shegay in culumada Soomaaliyeed ay gogol fidiyeen, horena uga digeen wax hadda taagan, hayeeshee ay si cad u diiday Dowladda waqtigeedu dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo.
“Madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa masuuliyadda qaadaya, kuwa daacadda u ah, kuwa ka soo hor jeeda iyo shacabka lagu dul dagaalamayo intaba isaga ayaa masuul ka ah, wixii intaas ka hallaaba isaga ayaa lagula xisaabtamayaa”. Ayuu yiri Sheekh Soomow.
Wuxu sheegay in Dowladnimo, Islaaamnimo iyo dhaqanka Soomaaliyeedba aysan sal iyo raad ku lahayn duullaankii uu shalay iyo xalay Farmaajo ku qaaday Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
“Madaxweynihii xilka ku wareejiyay inuu Farmaajo weeraro,aad ayaan u canbaareyneynaa, waana ka soo hor jeednaa, waxaana leennahay joog, xabadda jooji, maanta in aad dagaalka hor kacdo, waa wixii aan shalay ka digeynay haddana waan ka digeynaa” Ayuu yiri afhayeenka Culimada Soomaaliyeed.
Wuxuu wax laga xumaado ku tilaamay hadalkii xalay ee Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha, wuxuuna si cad u sheegay in wax muddo kororsi aysan dalkaan ka suura gali karin.
Sheekh Soomow, wuxuu si guud ugu baaqay in lagu laabto miiska wada hadalka si loo badbaadiyo dalka, wuxuu si gooni ah carrabka ugu adkeeyay in Farmaajo ay masuuliyadda oo dhan saaran tahay.